Maxaa Keenay in Xildhibaan Hore uu Is-Qarxiyo? - iftineducation.com
Maxaa Keenay in Xildhibaan Hore uu Is-Qarxiyo?
aadan21 / July 27, 2016
iftineducation.com – Sida uu sheegtay ururka Al-Shabaab, Saalax Nuux Ismaaciil oo loo yaqaanay Saalax Badbaado, oo horey uga tirsanaa xubnihii Baarlamanka ee dowladdii ku meel gaarka aheyd ayaa ka mid ahaa labaddii qof ee fuliyay labadii weerar ee ismiidaaminta ee shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Weeraradaasi oo ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku dhintay 13 qof.
Inkastoo aysan dowladda Soomaaliya si rasmi ah uga hadlin arrintan ayaa waxaa arrintan ay aad uga fajicisay dad badan, waxaana la isweydiinayaa, waxa xildhibaan hore oo haddana da’adiisu ay ka badneyd 50 sano ku kalifi kara in weerar noocaasi ah uu fuliyo.
Wariyeheenna magaalada Muqdisho Seynab Abukar Maxamed ayaa arrintan wax ka weydiisay qaar ka mid ah xildhibaanadii dowladdii KMG aheyd ee ay soo wada shaqeeyeen Saalax Badbaado, warbixintan ayeyna nooga soo dirtay.
Magaalo muslimiinta lagu dhibo oo Dab qasaaro xogan geystay ka kacay
Gabadh Qiima Heedu Cirka Galay Iyo Nin ku Raba 500 Sac iyo Sadex Gaadh...